Aleo ny vahoaka no hitsara | NewsMada
Par Taratra sur 11/11/2021
Efa tena antomotra tokoa ny fifidianana? Indrindra ny fifidianana filohan’ny Repoblika… Amin’izao, misy indray ny mievotrevotra ambony ihany manome lesona amin’izay hitany sy heveriny ho lesoka. Tsy misy maharatsy izany. Iombonana sy tokony hampiombona mandrakariva ny tanindrazana, fa tsy an’ny irery. Na inona na inona koa mitranga sy atao, tsy ilaozan’izay mandilana hotentenina. Tsy misy mahita kilema momba ny tena?
Na izany aza, ny mahavalalanina sy mahavariana: izay tsy mety nataon’ny tena fony mbola teo amin’ny fitondrana no mampievotrevotra ny sasany. Saika be lavitra noho ny tamin’ny fotoan’andro aza izay heverina ho tsy fahombiazana sy fahavoazana amin’izao. Mby amin’ny hoe fony teo tsy hita izay vita; nony tsy eo vao, hay avokoa io tsy anononana rehetra io. Izany moa no inona? Famendrofendroana, fanelingelenana, fanakorontanana…
Hatramin’izao, mbola izay ihany aloha ny fomba fanaovana politika? Toy ny tsy manan-kilema sy toa haninona iny ny tena rehefa tsy eo intsony… Vita koa ny mitsikera ho amin’ny fanarenana izay tsy mety, fanonerana izay tsy vita, fanorenana izay tokony hatao. Ny fanaratsiana ny hafa ve no hahatsara ny tena? Na ny fanakorontanana ny hafa no hampilamina ny tena… Fomba fiady avokoa izany, na tsy mendrika sy efa lany andro aza.
Mbola andairan’izay karazan-tetika toy izany ve ny vahoaka hoe tompon’ny teny farany amin’izay ampindramany fahefana amin’ny alalan’ny fifidianana? Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no ahazoana mitsara. Misy aza ny efa voatsara tamin’izany. Na izany aza, ady fiady mandrakariva ny fifidianana. Aleo hifanatrehana… Tsy ny fanatsatsoana sy fanakorontanana no ndeha hahazoana mora foana ny fahefam-panjakana.
Mila miova famindra? Indrindra izay efa teo fa nalana tamin’ny fifidianana; eny, na te hampiditra ny olony aza. Ady fiady avokoa izany: politika. Tsy misy tsy azo arenina amin’ny politika? Arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa arovana na iadiana io. Aleo ny vahoaka no hitsara fa tsy vitan’ny vava…